Golaha Amaanka ee QM oo ku baaqday in si deg deg ah loo xaliyo Khilaafka DF iyo Maamul Goboleedyadda - Awdinle Online
Golaha Amaanka ee QM oo ku baaqday in si deg deg ah loo xaliyo Khilaafka DF iyo Maamul Goboleedyadda
November 22, 2019 (AO) – James Swan Mudo ka badan hal sano ayuu xusay in uu jiro khilaaf ka dhex taagan dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadda, Jubbaland iyo Puntland.
“Horumar laga gaaro ajendaha himilada leh ee 2020 wuxuu u baahan doonaa isafgarad siyaasadeed oo heerkiisu aad u sareeyo. Tani waxay horseedi doontaa wada hadal, isu tanaasul iyo isfahan u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah” ayuu yiri James Swan.
“Ka dib in ka badan hal sano oo aan laheyn iskaashi wax ku ool ah oo u dhaxeeya Dowlada federaalka ah iyo Dowladaha xubinaha ka ah Federaalka, xaaladani waxay caqabad ku noqotey hagaajinta iyo gaarista waxyaabaha mudnaanta u leh qaranimada Soomaaliya. Hoggaamiyaasha Soomaaliya waa inay si deg deg ah wax uga qabtaan si meesha looga saaro ismari waaga u dhaxeeya dowladda feeraalka iyo Dowladda goboleedyadda” ayuu hadalkiisa kusii daray Danjire Swan.
Previous articleDhageyso :-Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in sanad aan la dhoofin dhuxul
Next articleDiyaarad sida gar gaar oo soo gaartay Magaaladda Muqdisho.